Muxuu la xiriira safarka Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Gaas ee dalka Shiinaha? • Horseed Media
You are here: Home / Featured / Muxuu la xiriira safarka Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Gaas ee dalka Shiinaha?
Muxuu la xiriira safarka Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Gaas ee dalka Shiinaha?
Posted: Hussein Farah - November 26, 2016
Madaxweynaha Dawladda Puntland, Cabdiweli Gaas ayaa u dhoofay waddanka Shiinaha maalintii Jimacada. Safarkiisa ayuu ku sheegay in ay tahay hormarinta Mashaariicda Puntland iyo casumaad uu ka helay Dawladda Shiinaha, Sidoo kale waxaan meesha ka marneyn in Dr. Cabdiweli Gaas uu ka mid yahay qaar kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida oo loogu yeeray magaaladda Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, si loogala hadlo arimo ku saabsan Doorashooyinka Dadban ee wakhtigii ay dhicilahayd marar badan dib u dhac ku yimid.
Haddaba Horseed Media ayaa ogaatey in safarka Madaxweynaha Puntland ee dalka Shiinuhu uu la xiriiro kadib casumaad uu ka helay shirkadda CCECC (China Civil Engineering Construction Corporation ) oo ah shirkaddii dhistay Garoonka Diyaaradaha ee magaalada Bosaso, kaas oo dhaqaalihiisa ay bixisay DawladdaTalyaaniga. CCECC ayaa ah shirkad Dowli ah oo ay leedahay xukuumada Shiinaha, taas oo ka shaqaysa bariga iyo bartamaha Afrika. CCECC ayaa wararka aan ka heleyno ilo kala duwan sheegayaan in ay mudo ku mashquulsaneyd sidii ay u heli lahayd goobo badda iyo berigaba ah si ay uga baarato macdan iyo shidaal. Dhanka kale, Madaxweyne Gaas ayaa isna mudo ku mashquulsanaa sidii uu u heli lahaa shirkaddo ama dawladdo ka caawiya dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha. Arrintaasi oo keentay in ay kulmaan baahida Puntland iyo danta gaarka ah ee arimaha shidaalka iyo macdanta ee shirkadda CCECC.
Shirkadda CCECC ayaa xarumo ku leh, magaalooyinka Bosaso, Addis Ababa, Jabuuti iyo Nayroobi waxaana ay dhistaa waddooyinka iyo jidadka tareenadu maraan. Ma ah shirkad shidaal amaba macdan. Laakiin waxa ay ka mid tahay shirkadaha Shiinaha ee Afrika ku soo yaacay. Shirkadahaas ayaa waxaa ay Dawladdaha ka caawiyaan kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, xarumaha tareenad iyo horumarinta dekedaha. Waxay ku bedashaan mashaariicda ay qabtaan in loo siiyo khayraadka dabiiciga (Row Material) sida, shidaalka iyo macdanta oo ay baartaan, iyo maraakiib ay leeyihiin shirkadahooda kaluumaysiga oo ruqsado loo siiyo dal-dalashada Kaluunka.
Dowlada Puntland ayaa Shirkadda CCECC ku wareejisay si lacag la´aan ah dhul ballaaran oo ku yaal magaaloyinka Bosaso iyo Garowe. Khaasatan aaga kaabi ku haya gegida diyaaradaha ee magaalada Bosaso iyo dhulweyn oo laga siiyey meel aan ka fogeyn Madaxtooyadda Dawlad Goboleedka Puntland. Madaxweynaha ayaa labadaas dhul u siiyey si ay waddanka mashaariic uga fuliyaan. Ilaa haddana wax mashaaric ah kama fulin. Waxaa keliya oo ay dhiseen Airportka Bosaaso oo lacagteeda ay bixisay Dawladda Talyaaniga.
Tani waxay ka dhigan tahay in shirkadda CCECC ay ku heshay dhul qaali ah si lacag la´aan ah iyadda oo aan wadanka ka fulin mashaariicdii kale ee laga rajeenayey. Xiligan Shirkadu waa ka guurtey Puntland oo alaabteedi waa ka raratay.
Danaha Puntland iyo Shirkadda CCECC
Madaxweynaha Puntland oo in badan oo shacabka Puntland ah u arkaan in uu ku guuldaraysatay wax qabadkii uu balanqaaday wakhtigii uu doorashada ku jirey iyo sadexdii sano oo la soo dhaafay, ayaa hadda waxaa uu ku jiraa dedaal badan oo uu ku rabo in uu wax ku qabto. Arrimahaas ayaa waxa ay keentay in ay kulmaan mar kale baahida Puntland iyo danaha gaarka ah shirkada CCECC oo hadda dooneysa in ay isku balaariso khayraadka dabiiciga ah ee Puntland.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in shirkadda CCECC ay dooneyso in la siiyo dhul iyo goobo kamid ah Badda si ay shidaal iyo macdan uga baarato, sidoo kale waxay dooneysaa in lagu wareejiyo dekedda Bosaso iyo in Maraakiibtooda kaluumaysiga la siiyo sharci ay kaga kaluumaystaan badaha Puntland.
Shirkii Qarsoodiga ahaa ee Jabuuti
Wararku waxaa ay sheegayaan in Wasiiru Dawlaha Wasaarada Kaluumaysiga Cabdiraxmaan Jaamac Kulmiye iyo Agaasimaha Macdanta iyo Shidaalka Cabdicaiis Xaaji-Sayn, Wasiirka Dekedaha Siciid Maxamed Raage iyo Khadar Cabdiraxmaan Faroole ay kulan qarsoodi ah kula galeen shirkadda CCECC, Hotelka Kampinski ee magaaladda Djibouti oo weftiga Puntland shirkada CCECC muddo todobaad ah ku haysey.
Shirkaasi qarsoodiga ahaa ayaa waxaa kasoo baxay is-afgarad buuxa, sida Horseed Media ogaatey. Qodobada lagu heshiiyey waxaa kamid ahaa; in heshiisyadda la xiriira arrimaha shidaalka & macadanta iyo kaluumaysiga & dekeda Bosaaso lagu saxiixdo waddanka Shiinaha. Waxaana la rumeysan in safarkan Madaxweynaha Puntland ee Shiinaha uu la xariiro dhameystirka qodobadii kasoo baxay shirkii qarsoodigaa ahaa ee Jabuuti.
Horseed Media ayaa xiriir la sameysay Madaxtooyada Puntland, iyadoo aan ka codsatay inay faah faahin ka bixiyaan xogtan cusub ee la xariirta heshiisyada la xariira Shidaalka, Macdanta iyo Kaluumeysiga ee la doonayo in lagu saxiixo dalka China.
Madaxtooyada Puntland ayaan wax jawaab ah kasoo bixin Emailkii aan u dirnay intaan baaritaanka wadnay.
Waxaa sidoo kale xiriir dhanka Emailka ah la sameynay Agaasimaha Hay’ada Batroolka iyo Macdanta Puntland Ciise Maxamuud Dhoolawaa oo aan wax ka weydiinay safarkan Madaxweynaha Puntland ku tagayo dalka Shiinaha.
Agaasime Ciise ayaa Email jawaab ah oo uu usoo diray Horseed Media ku sheegay in uusan isagu la socon in safarka Madaxweynaha uu la xariiro arrimaha Batroolka iyo Macdanta isagoona yiri;
“….Haddii uu jiro heshiis ku saabsan arrimaha Shidaalka iyo Macdanta Puntland oo ay xukuumada Puntland geleyso, dabcan aniga oo Madax ka ah Hay’adda Macdanta iyo Shidaalka ayey i soo mari lahayd, sida uu sharcigeena qorayo waxaa heshiisyadda nala qiimaya Qareenadayada iyo la taliyayaashayada arrimahaas, ka hor inta aan la saxiixin, marka heshiis aniga iyo Madaxweynuhu aan ka wadda hadalay ma jiro…”
Dhibta Siyaasadeed ee ka imaan karta heshiiyadda.
Dad badan oo aan arrinka ka waraysanay ayaa soo dhoweeynaya heshiisyada noocaan ah. Laakiin hadana, heshiisyo iyo siyaasad aan aad looga fiirsan dhib ayey Puntland ku keeni kartaa, khaasatan xirrirka Dawladdaha deriska, kuwa Reer Galbeedka iyo kuwa Carabta ah oo hada faraha kula jira arrimaha siyaasadda Somaliya.
Horseed Media oo arrintan wax ka weydiisay khubarada wax ka yaqaan heshiisyada Macdanta iyo Batroolka, kuwaasi ayaa qaarkood walaac ka muujiyey waxyaabaha ka dhalan kara mustaqbalka.
Dhibta sharci ee ka imaan karta
Badaha ku xayndaaban dhulka Puntland waxaa wax ku leh shirkaddo ka soo jeeda Yurub iyo Maraykanka. Haddii meelaha ay leeyihiin la siiyo shirkaddo laga lee yahay Shiinaha waxaa ka imaan kara is maandhaaf. Arinkaas wuxuu kale oo uu keeni doonaa siyaasado danabaysan oo ka dhex curta Puntland iyo Dawladdaha reer Galbeedka ah. Dhanka kale, waxaa ka faa’iidaysan doonta Dawladda Federaalka Somaliyeed oo muran siyaasadeed halkaas ka keeni karta.
Dhibta Bulsho ee ka imaan karta
Heshiiyo aan dadka gelaya aqoon u lahayn, aagaga s la siinayo shirkadaha cusub oo qarkood xasilooni darro ka jiri karto, waxay keeni kartaa dhib bulsho. Tusaale ahaan, hadii la galo heshiis ay shirkaddaha kaluumaysiga Shiinaha ku soo galaan badaha Soomaaliya, waxaa hubaal ah in jariifka shirkadaha Shiinaha dhib u geysandoono bulshada kaluunka ka ganacsada iyo kuwa ku noolba.
Shirkadaha Kaluumeysiga ee Shiinaha ayaa la isku raacsan yahay in ay yihiin kuwa ugu dhibta badan caalamka. Burcad Badeeda hada jirta waxaa keenay shirkado shisheeye oo ka kaluumaysan jirey badaha u dhow dhulka Dawladda Puntland.
Haddii Shirkadda CCECC lagu wareejiyo Dekeda Bosaaso waxay keeni kartaa siyaasad qalafsan oo ka dhex dhalata Puntland iyo shirkadda sanadkii hore loo saxiixay ee Marin Divers oo hadda heshiis la leh Puntland. Heshiiskaas oo aan weli la horgeynin Barlamaanka Dawladda Puntland. Waxaa taasi usii dheer arrintan waxay sababi kartaa isku dhac ka yimaada shirkadda Dubai Port oo sida wararka Dubai naga soo gaarey sheegayaan Madaxweynaha Puntland iyo shirkadaasi wadda saxiixdeen heshiis is afgarad ah (MOU), muddo bil ka hor.
Shirkaddaha hada is dulsaaran ee Carabtana waxaa ay noqondoonaan kuwo sharciga la tiigsadda dawlada Soomaliya iyo Dawladda Puntland, sida Horseed Media ka ogaatey sharci yaqaan ku tkhasusey arrimaha kheyraadka, kaas oo dalbadey in aan magciiisa la soo xigan.
Dekadda Bosaso ayaa hadda maraysa shirkadii saddexaad, waxaana ay keeni kartaa in doonitaanka Madaxweynaha Puntland uu noqdo sida “HASHII LABADA GEED JECLAATEY IN AY HAL MAR WADA CUNTO”, Waxaana ay keeni kartaa in dekadda Bosaso ay weydo hormarintii loo ballan qaadey, sidoo kale waxay keeni kartaa in ay burburto riyada Madaxweynaha Puntland ee ahayd in uu dhiso dekadda Garacad iyo wadada dheer ee isku xirta dekadaasi iyo dalka Itoobiya.
Dawladda Puntland xaq ayey u leedahay in ay dhulkeed gaarsiiso horumar la taaban karo iyadda oo maraysa shuruucda u degan. Waxaa kale oo ay xaq u leedahay in ay heshiis la gasho shirkado shisheeye. Laakiin waa in ay ka fikirtaa dhibta ay keeni karto shirkad shisheeye, khaasatan dhibta siyaasadeed, mid bulsho iyo mid sharciba. Weliba waa in ay aad uga fekertaa heshiisyada la gelayo in ay yihiin kuwo u qalma shacabka Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed.